​दुनियाँले यहीँ गर्दा भको छ भने म किन विदेश जाने ?
Sat, May 26, 2018 | 11:51:23 NST
Saturday, Dec 24, 2016
16:31 PM (1 year ago)
Total Views: 10.0 K
सन्तोष जोशी, लालबन्दी सर्लाही
म सन् २००३ मा पहिलो पटक विदेश गएको हो । अहिले २०१६ पनि सकिन लाग्यो । १३ वर्ष भनेको चानचुने समय होइन । तर अहिले आफैंलाई यो समय त्यतिकै
खेर गयो भन्ने लाग्यो । विदेशको यात्रा सुरु गर्ने बेलामा नेपालमा गर्नलाई के छ र भन्ने लाग्यो । त्यही भएर विदेशिएँ । विदेशमा त कमाइ भइहाल्छ नी भन्ने अरु जस्तै मेरो पनि सोचाई थियो ।
यो क्रम अहिलेसम्म पनि चलिरहेको थियो । तर पछिल्लो पटक ५ वर्ष विदेश बसेर फर्किएपछि भने मेरो मन पुरै फेरियो । म विदेश जाँदा गाउँमै केही गरिरहेकाहरु प्रगति गरिरहेका छन् । त्यो कुरा १३ वर्ष विदेश बसाइ जाँदा लागेको ऋण तिर्न र घर खर्चमै ठिक्क भएपछि मात्रै सोचें । त्यही भएर विदेश जाने सोच त्यागेर ग्रील उद्योग सुरु गरें ।
भर्खरै सुरु गरेको छु । त्यसैले लगानी भइरहेकाले अहिले नै लगानी यति भयो भनेर हिसाब गरेको छैन । तर सुरुवात राम्रो भएको छ । अहिले यो ग्रील उद्योगमा मैले अरु मान्छे राखेको छैन । यसका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न हाम्रै परिवारमा पुग्ने मान्छे छन त्यसैले अरु मान्छे नराख्ने सबै काम आफैं गर्ने निधो गरेको छु ।
विदेशमा धेरै दुःख गरें , त्यो पनि १३ वर्ष तर खै त अहिले मसँग के छ ? कमाएर जमाउन सकिन । यदी जमाउन नसक्ने हो भने परिवारभन्दा टाढा परदेशमा एक्लै किन बस्ने ? त्यसैले अब विदेश नजाने अठोट गरेर यहीँ व्यावसाय सुरु गरेको हुँ । दुनियाँले यहीँ गर्दा भको छ भने म किन विदेश जाने ?
छोरा विदेश पठाए साहु धनी, गाउँघरमै दुःख गरे आफैं धनी
मलेसियामा महाथिर नेतृत्वको सरकार : नेपाली कामदारलाई फाइदा
परदेशीका परिवारलाई समूह मनोपरामर्श किन आवश्यक छ ?
​प्रविधिले पनि जोड्न नसकेको घरदेशी र परदेशीको मन
विदेशमा फाँसी कुरेका सन्तानलाई पर्खने बाआमाका कथा संजोगले पश्चिम नेपालका अमर र पूर्वी नेपालका अनिशको गन्तव्य एउटै देश बन्यो । ती दुईलाई दुखिया पनि एकै खालको परिस्थितीले बनायो । दुवै जना पराई देशमा मान्छे मारेको अभियोगमा झ्यालखानामा परे । र अदालतले दुवैलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनायो ।
दुवईमा एक नेपालीले भेट्टाएको झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरे (भिडियो) युएईको दुवईमा कार्यरत एक नेपालीले आफूले भेटेको डेढ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् । झापाका मिरन कार्कीले आफूले काम गर्ने ठाउँमा भेटेको १ लाख १८ हजार अमेरिकी डलर भेटेर फिर्ता गरेका हुन् ।
दुधे छोरी छोडेर बुहारी बेपत्ता, सासूससुरा भन्छन् : बुहारीलाई फोनले बिगार्‍याे पाल्पा, जेठ ९ – पाल्पाको तानसेन नगरपालिका –१२, बौघापोखराथोककी तुलसा विक दुई वर्षकी छोरी घरमै छोडेर बेपत्ता भएकी छन् ।
उज्यालोको समाचार प्रभाव : युएईमा अलपत्र १० जनालाई खानाको व्यवस्था जुट्यो
उमाकान्त पाण्डे/उज्यालो । युएई, जेठ ११ – सारजाहकाे सनैया ३ मा अलपत्र १० जना नेपालीलाई खानाको व्यवस्था भएको छ ।
युएईमा १० जना नेपाली अलपत्र, कालोसूचीमा परेको कम्पनीमा कसरी आए कामदार ?
जेठ ११ – युएईको सारजाहमा तीन महिनादेखि १० जना नेपाली अलपत्र परेका छन् ।
विदेश जानेलाई वैदेशिक रोजगार एप, माग तलब र कम्पनी बारे बुझ्न सकिने
काठमाडौं, जेठ ११ – रोजगारीका लागि विदेश जानेलाई सूचना दिने वैदेशिक रोजगार एप सार्वजनिक भएको छ ।
​बिहीबार बढेको रियाल, रिंगिट र दिर्हामको मूल्य आज घट्यो
काठमाडौं, जेठ ११ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २९ रुपैयाँ ०८ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ २४ पैसा रहेको छ ।
तपाईं वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने विदेश जानुअघि गरिएको सबै प्रक्रियाका कागजपत्रको एक प्रति परिवारलाई छोडेर जानुहोस्। विदेशमा अलपत्र पर्नुभयो वा बिरामी र अरु कुनै खालका अप्ठेरोमा पर्नुभयो भयो भने तपाईंलाई सहयोग गर्न तिनै कागजपत्र काम लाग्छन्। यो जानकारी आफन्त र साथीभाइलाई पनि सुनाउनुहोस्। इन्फोग्राफः उज्यालो।